बागलुङको मध्यपहाडी लाेकमार्गमा सवारी अापसमा ठाेकिदा दुई घाइते एककाे मृत्यु ! अपडेटः काठमाण्डौ लैजाँदै गर्दा घाईतेको बाटैमा मृत्यु भएपछि हेलिकप्टर पोखरामा अवतरण – ebaglung.com
बागलुङको मध्यपहाडी लाेकमार्गमा सवारी अापसमा ठाेकिदा दुई घाइते एककाे मृत्यु !
अपडेटः काठमाण्डौ लैजाँदै गर्दा घाईतेको बाटैमा मृत्यु भएपछि हेलिकप्टर पोखरामा अवतरण
२०७४ पुष ५, बुधबार १८:११	Top News, थप समाचार, प्रमुख समाचार, समाचार 1 comment
बिमल खड्का / कमल पौडेल, बागलुङ २०७४ पुष ५ । मध्यपहाडी लोक मार्ग अन्तर्गत बागलुङ जिल्लाकाे बडिगाड गाउँपालिका- २ काँडेरुख नजिकै अाज बिहान पिकअप र मोटरसाईकल एकआपसमा ठोक्किदाँ २ जना घाइते भएका छन् भने १ जनाकाे मृत्युु भएकाे छ ।
मृत्यु हुनेमा ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं. १ का वर्ष ३६ का खगेन्द्र विसि रहेका छन ।
उनलाई हेलिकप्टर मार्फत गण्डकी अस्पताल पाेखरा लैजादै गर्दा मृत्यु भएकाे ढाेरपाटन नगर प्रमुख देव कुमार नेपाली बताएका छन ।
खगेन्द्र विसिलाई काठमाण्डौको ग्राण्डि अस्पताल लैजाने क्रममा उडिरहेको हेलिकप्टरमै मृत्यु भएको हो । ‘हामीले घाईतेको तत्काल उद्धार गरि दुईजनालाई काठमाण्डौ पठाएका थियौँ,’ नगरप्रमुख नेपालीले भने, ‘हेलि उडिरहेकै अवस्थामा एक जनाको मृत्यु भएपछि पोखरा ल्याण्ड गरेर अर्का घाईतेको गण्डकी अस्पताल पोखरामा उपचार हुँदैछ ।’ दुवैलाई हेलिकप्टर मार्फट काठमाडौंको ग्रान्डि हस्पिटलमा पुर्याउने वताइएको थियो।
घाईते २ जना मध्य सोहि स्थानका वर्ष २७ का सुरेन्द्र वोहोराकाे अहिले गण्डकी अस्पताल पाेखरामा उपचार भईरहेकाे छ ।
तीनै जना घाईतेको सुरुमा गुल्मी मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. ७ वामी टक्सारमा रहेको मल्ल मेडिको फर्मामा उपचार गरिएको थियो। घाइते मध्ये भरत विसिको भने अवस्था सामान्य रहेको र उपचार पछि थप उपचारको लागी गाडि मार्फत पोखरा गएको मल्ल मेडिकलका धर्मेन्द्र मल्लले जानकारी दिनुभएको छ।
बिहान खर्वाङबाट ग्वालीचौर तर्फ जाँदै गरेको ना ४ च ३६६७ नम्वरको पिकअप जिप र विपरित दिसावाट आउँदै गरेका ध १ प ३२४६ र बा ५५ प ८०५० नम्वरका मोटरसाईकल आपसमा ठोकिँदा सो दुर्घटना भएको थियाे ।
पिकअप जिप चालक र गाडि खर्वाङ प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको प्रहरी नायव निरिक्षक लाल वहादुर चौधरीले जानकारी दिएका छन ।
बुर्तिवाङवाट बुटवलका लागि हिँडेका मोटरसाईकल सवार यात्रुवाहक वसलाई ओभरटेक गर्ने क्रममा विपरित दिसा तर्फवाट गैरहेको पिकअपसंग ठोकिएको स्थानियले वताएका छन ।
खर्वाङ गल्कोट बागलुङ बुर्तिवाङ
‘चुनावी रिस’ मा गरिव वोटे माझी युवाहरुले कुटाई खाए
December 21, 2017 at 4:13 pm -
एकदमै दुखद खबर ! यो भन्दा पहिला दुर्घटना भयको तेती हुने गरेको थिएन तर आजकल रोड पिच भएर होला काडेबॉस माँ पहिला पानी दुर्घटना भएको थियो !
नया तजा खबर का लागी E baglung लाई धन्यवाद